Blue Marble Evaluation: Thinking in Transformational Ways at a Time When We Urgently Need To - McKnight Foundation
Qiimaynta Marble Buluugga ah: Ka Fikiridda Siyaabaha Isbeddelka Waqtiga Markii Aan Si Deg Deg Ah Ugu Baahnayn
Maqaalkaan waxaa soo saaray agaasimaha barnaamijka caalamiga ah Jane Maland Cady asal ahaan waxaa daabacay Isbaheysiga Caalamiga ah ee Cuntada mustaqbalka iyo halkan ku habboon fasax.
Soo Koobid: Mu'asasada 'McKnight Foundation' waxay taageertay kii ugu horreeyay ee hal-abuurnimada Qiimeynta Maareynta Maqaarka - laga bilaabo Michael Quinn Patton iyo kooxda Savvy World, illaa qiimeeyayaasha ku dhegan Isbahaysiga Caalamiga ah ee Cunnada Mustaqbalka iyo Barnaamijka Cilmi-baarista Dalagyada Wadaagga. Qoraalkan bilowga ah ee 'Blue Marble Cohort' wuxuu midba midka kale ka bartay, midba midka kale wuu ku tartamay, wuxuuna si firfircoon u siinayaa qalab muhiim ah iyo qaab dhismeedka goobta. Qorista maalinta la bilaabay Qiimaynta Marble Buluugga ah: Dhismooyinka iyo Mabaadi'da ee Minneapolis, Jane Maland Cady, Agaasimaha Barnaamijka, Caalamiga ah - McKnight Foundation, wuxuu sharxayaa in shaqadu kaliya ay bilaabatay iyo sababta ay muhiimka u tahay in loo adeegsado qaabkan qiimeynta si wax looga qabto caqabadaha halista ah ee soo foodsaaraya adduunkeena iyo kan kaliya.
Waxaan leenahay hal meeraha.
Hal-xididkan ayaa wajahaya culeysyo culus, oo kuwa ugu badan ay wadaan dadka ku nool. Laga soo bilaabo isbedelka cimilada iyo soogalootiga qasabka ah ilaa kala qeybsanaanta siyaasadeed ilaa xad dhaafka xuduudaha meeraha, hadda waa waqtigii dhammaanteen inaan dhammaanteen wax ka qaban lahayn hal abuurka iyo meeraha kaliya.
Qiimaynta Buluuga ah ee Maarso buluuga ahi wuxuu ina siinayaa qaab aan wax uga qabanno caqabadaha aan horay u dhicin iyo kuwa muhiimka ah ee innaga dhammaanteen ina haya. Waxaa lagu dhisay afar mabaadi'da guud iyo 12 aasaaska hawlgalka, mid ka mid ah nalalka hagahan ayaa sheegaya in ay tahay in aan "ogaano oo aan wajaheyno xaqiiqada Anthropocene oo aan u dhaqmno si habboon." waxaan ku biirinay burbur.
Qiimaynta lagama reebayo xaqiiqadan.
Dhawr sano ka hor Shir sannadeedka Kooxda Qiimeynta Mareykanka, waxaan ka qeybgalay kulan halkaas Michael Quinn Patton uu kaga hadlay fikradda ah sida xirfadda qiimeynta iyo kuwa ay ula shaqeeyaan ay u baahan yihiin qalab cusub si loo fahmo adduunka aan ku nool nahay. Tani waxay isla markiiba dib u fajacisay aniga. Waxaan ka shaqeeyay aag qiimeynta iyo cilmi baarista 25kii sano ee la soo dhaafay anoo ah qiimeeye / cilmi baaris ama maalgaliye sidaas ah. Sanadahan dambe, waxaan bartay in su'aalaha aan weydiinno ay saameyn ku leeyihiin waxa aan aragno iyo sida aan ula macaamilno adduunka. Waxay qaabeeyaan waxaan cabbirno. Dhanka, waxa aan cabirno iyo su'aalaha aan weydiineyno waxay saameyn ku yeeshaan sida aan u fahamno caqabadaha iyo fursadaha.
Xallinta arrimaha sugnaanta cunno ee aan wajahayno maanta waxay u baahan tahay inaan ka fikirno isku-darnaanta iyo kakanaanta nidaamka aan isku dayeyno inaanu beddelo. In kasta oo qaabab iyo qaabab qiimayntu ay wax ka tarayaan fahamka qaybo gaar ah oo ka mid ah nidaamka, waxay ku kooban yihiin fahamka is-dhexgalka nidaamyada. Qiimaynta Marble Buluuga ah ayaa ku soo dhacday hawshan madhan.
Maanta, Barnaamijka McKnight Foundation ee Wadashaqeynta Cilmi baarista Dalagyada (CCRP) waxay maal gelisaa cilmi baaris ku saabasan diiradda saaraya xalka bey'ada ee beeraleyda iyo qoysaskooda. Waxaan aqoonsannahay inay ka shaqeyso arrimaha dhulka ku saabsan arrimaha beeraleyda, halka wax soo saarka cilmi baarista ay u isticmaali karaan kuwa kale si ay u fahmaan oo ay u gartaan muhimadda iyo saameynta ku lug yeelashada waxqabadka maxalliga ah iyo ahmiyadaha dadka. (Claire Nicklin's blog) waxay bixisaa tusaale waxtar leh, halkan.) Runtii, udub dhexaadka CCRP waa fikirka isweydaarsiga joogtada ah ee macluumaadka maxalliga, barnaamijka, miisaaniyad heer gobol iyo heer caalami ah.
Qaadashada meele ku saleysan waxay udub dhexaad u tahay shaqadeenna meel kasta oo ay dunida ka joogto, ha ahaato halkan guriga Minnesota, ama kan Andes sida CCRP. & #8221; —JANE MALAND CADY, DIRECT BARNAAMIJKA DALKA
Qaadashada diiradda ku saleysan meel waxay udub dhexaad u tahay shaqadeenna meel kasta oo ay dunida ka joogto, ha ahaato halkan gurigaaga Minnesota, ama kan Andes sida CCRP. Kulligeen waxaan haysannaa waxyaabo badan oo aan isku baranno oo sidaas ayaan u istcimaalaynaa astaanta isugeyn la'aanta si aan u muujino - una dabaaldego - socodka joogtada ah ee macluumaadka. Muuqaalkani wuxuu si xoog leh ugu xadgudbay Nidaamka Hawlgalka ee Qiimeynta Maareynta Maareynta Labaad "2," "GLOCAL" - kaasoo sare u qaadaya muhiimadda isku xirnaanta wuxuuna ansaxinayaa nooca muhiimka ah ee is dhex galka howlaha isbadelka.
Fikradda Isbeddelka CCRP (TOC) sidoo kale waxay si cad isugu daraysaa fikradaha isbadelka heer caalami ah waxayna ina tuseysaa sida kuwa kuxiran howlaha maxalliga ah. Mar labaad, astaanta xad-dhaafka ah ee xarunta hadda ToC wuxuu muujinayaa sida dadaalada caalamiga ahi ay waliba uga faaiidaan barashada gudaha iyo aqoonta. Waxaa muhiim ah in caalamka aan loo arkin mid uun soosaarid ah, ama “isugeyn ah” xiriir la leh maxalliga ah, laakiin taa bedelkeeda u ah xiriir sicir-barar ah. Qaabkan ayaa sidoo kale u oggolaaday CCRP in ay si aad ah ula kac uga tahay deeq-siinteeda iyo taageerada deeq-bixiyeyaasha.
Gundhig ahaan, 'Mar Marble' wuxuu ku saabsan yahay faa'iido iyo adeegsi. Waa la-waafajin iyo koritaan labadaba. Iyo, gaar ahaan, iyadoo lagu saleynayo mabaadi'da, waxay nagu dhiirrigelisaa oo noo oggolaataa inaan ka fikirno qaabab is beddel leh waqti aan ubaahanahay inaan uga fikirno dariiqooyin aan horay loo arag. Hadda, sida deeq-bixiyeyaasha ay u raadinayaan inay wax ka qabtaan caqabadaha waaweyn - isbeddelka cimilada, sinnaanta, magaalooyin caafimaad qaba, sugnaanta cunno, in la magacaabo dhowr - Qiimeynta Maqaarka buluuga ah waxay ina siineysaa dariiq muhiim ah oo aan ku fikirno, wax yeelno iyo inaan noqonno.
In ka badan shaqadayda iyo noloshayda shakhsi ahaaneed, waxaan u go'ay inaan dhiso nidaamyo caafimaad oo firfircoon oo firfircoon, adoo riixaya noocyada dhaqamada beeraha iyo nidaamyada cunnada ee dib u soo nooleynaya bulshooyinka caafimaad qaba, deegaannada iyo dhaqaalaha Mareykanka iyo waddamada Afrika iyo Latin America. Qiimaynta Marble Buluuga ah waa cutubka xiga ee shaqadan.
Mawduuca: International, Cilmi-baarista Xoolaha Iskaashatada
Shabakadaha Cilmi -baarista Beeralayda Wada -shaqayntu Waxay Naga Caawin Karaan Hagaajinta Nidaamyada Cuntada Adduunka
By Jane Maland Cady Sebtember 2021
Waa maxay sababta aan u maalgashanayno inaan u beddelno Nidaamyada Cuntada Adduunka
By Tonya Allen, Andre Degenszajn, Melanie Schultz van Haegen Sebtember 2021
McKnight wuxuu soo dhaweynayaa Paul Rogé oo ah Sarkaalka Barnaamijka Sare ee Caalamiga ah
Astaamaha Paul Rogé Juun 2021